Ny Fanahy Masina dia manana ny toetran'Andriamanitra, mitovy amin'Andriamanitra ary manao zavatra izay Andriamanitra irery ihany no manao. Sahala amin’Andriamanitra, masina ny Fanahy Masina - masina dia masina toy ny manota ny manala ny Fanahy Masina tahaka ny Zanak’Andriamanitra (Hebreo 10,29). Ny fahafaham-po, ny fitenenan-dratsy ny Fanahy Masina dia fahotana tsy voavela heloka (Matio 12,32). Midika izany fa masina ny fanahy ary tsy mitovy amin'ny tempoly akory dia voalaza fa masina.
Tahaka an'Andriamanitra, ny Fanahy Masina dia mandrakizay (Hebreo 9,14). Toa an’Andriamanitra ny Fanahy Masina na aiza na aiza (Salamo 139,7: 9). Sahala amin’Andriamanitra, ny Fanahy Masina dia tsy mahay (1 Korintiana 2,10: 11-14,26; Jaona). Ny Fanahy Masina dia manangana (Joba 33,4; Salamo 104,30) ary mamorona fahagagana (Matio 12,28; Romana 15,18-19) ary mandray anjara amin'ny asan'Andriamanitra. Andalan-tsoratra maromaro no manondro ny Ray, Zanaka ary Fanahy Masina ho masina. Ao anatin'ny resadresaka momba ny fanomezam-pahasoavana ara-panahy, i Paoly dia manondro ireo fananganana ny Fanahy, Tompo sy Andriamanitra (1 Korintiana 12,4: 6). Nofaranany tamin'ny vavaka misy fizarana telo ny tariny (2 Korintiana 13,14). Petera dia manomboka taratasy iray amin'ny endrika telo hafa (1 Petera 1,2). Na dia tsy porofon'ny firaisan'ny Andriamanitra telo izay iray aza ireo ohatra ireo dia manohana io hevitra io izy ireo.
Ny fomba fanaovana batisa dia manamafy ny famantarana ny firaisana toy izao: "Atao Batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina" (Matio 28, 19). Izy telo ireo dia manana anarana, izay midika hoe fahariana, rehefa manao zavatra ny Fanahy Masina, dia manao izany Andriamanitra. Rehefa miteny ny Fanahy Masina, dia miteny Andriamanitra. Rehefa nandainga taminny Fanahy Masina i Ananiasy dia nandainga tamin Andriamanitra (Asan’ny Apostoly 5: 3-4). Nilaza i Peter fa tsy nandainga i Ananiasy fa tsy solontenan'Andriamanitra, fa Andriamanitra mihitsy.
Tao anaty andalana iray dia nilaza i Paoly fa ny tempolin'Andriamanitra dia ny kristiana (1 Korintiana 3,16), ao amin'ny iray hafa dia milaza izy fa tempolin'ny Fanahy Masina (1 Korintiana 6,19). Isika dia tempoly hivavahana amin'ny andriamanitra iray fa tsy hery tsy miankina. Rehefa nanoratra i Paoly fa tempolin'ny Fanahy Masina dia manondro izy fa Andriamanitra Fanahy Masina.
Koa ny Fanahy Masina sy Andriamanitra dia mitovy: "Fa raha nanompo sy nifady hanina tamin'ny Tompo izy ireo, dia hoy ny Fanahy Masina: Ataovy amin'i Barnabasy sy Saoly aho ho amin'ny asa niantsoako anao" (Asa. 13,2) , Eto dia mampiasa ny teny manokana toa ny an'Andriamanitra ny Fanahy Masina. Torak'izany koa, ny Fanahy Masina miteny fa ny Isiraelita dia nitsapa sy nanandrana azy ary niteny hoe: «Nianiana tamin'ny hatezerako aho: tsy tokony hahita ny fitsaharako ianao» (Hebreo 3,7: 11). Fa ny Fanahy Masina dia tsy anarana hafa fotsiny ho an'Andriamanitra. Ny Fanahy Masina dia tsy miankina amin'ny Ray sy ny Zanaka, izay naseho tamin'ny batisan'i Jesosy (Matio 3,16: 17). Samy mahaleo tena izy telo ireo kanefa iray ihany, ny Fanahy Masina dia manao ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Avy amin'ny alalàn'Andriamanitra sy naterak'Andriamanitra isika (Jaona 1:12), izay mitovy amin'ny hoe nateraky ny Fanahy Masina (Jaona 3,5). Ny Fanahy Masina no fomba izay itoeran'Andriamanitra ao amintsika (Efesiana 2:22; 1 Jaona 3,24:4,13;). Mitoetra ao amintsika ny Fanahy Masina (Romana 8,11:1; 3,16 Korintiana) - ary satria miaina ao amintsika ny fanahy, dia afaka milaza koa isika fa Andriamanitra dia mitoetra ao amintsika.
Ny Fanahy Masina dia manokana
Ny Baiboly dia mamaritra ny Fanahy Masina amin'ny toetr'olombelona:
Velona ny fanahy (Romana 8,11:1; 3,16 Korintiana)
Miresaka ny saina (Asa. 8,29; 10,19; 11,12; 21,11; 1 Timoty 4,1; Hebreo 3,7)
Ny saina indraindray dia mampiasa ny mpisolo anarana hoe "I" (Asan’ny Apostoly 10,20; 13,2)
Ny saina dia afaka adika, voasedra, halahelo, manompa ary fanenjehana (Asa. 5,3: 9; 4,30; Efesianina 10,29:12,31; Hebreo; Matio)
Ny saina no mitarika, manelanelana, antso ary fitaovana (Romana 8,14:26; 13,2; Asa. 20,28;)
Ny Romana 8,27 dia milaza ny lohan'ny fanahy. Ny Fanahy dia mandray fanapahan-kevitra - ny Fanahy Masina dia nandray fanapahan-kevitra (Asan’ny Apostoly 15,28). Ny saina mahalala sy miasa (1 Korintiana 2,11:12,11;). Tsy hery tsy manavakavaka izy; Jesosy niantso ny Fanahy Masina Paraclet - nadika ho Mpanolotsaina, Mpanolotsaina, na Mpanapaka.
"Ary Izaho hangataka amin'ny Ray, ary homeny mpanome saina hafa fa homba anao mandrakizay: ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao satria tsy mahita izany ary tsy fantany. Fantatrao izy satria mijanona ao aminao ary ho ao aminao » (Jaona 14,16: 17) .
I Jesosy no mpanolotsaina voalohany ho an'ny mpianatra. Rehefa mampianatra izy dia mijoro ho vavolombelona, ​​manameloka, mitarika ary tsy mahatakatra ny fahamarinana (Jaona 14,26:15,26; 16,8:13; 14;). Ireo rehetra ireo dia andraikiny manokana. Jaona dia mampiasa endrika masculine amin'ny teny grika hoe parakletos satria tsy ilaina ny mampiasa ny nétrale. Ao amin'ny Jaona 16,14 na ny mpisolo anarana hoe "izy" aza dia ampiasaina aorian'ny fampiasan'ny fanahy ny teny tsy miandany. Mety ho mora kokoa ny mitodika amin'ilay mpisolo tena tsy miandany amin'ny atsy ho atsy sy ny aroa, saingy tsy manao izany i Johannes. Ny saina dia niantehitra tamin'ny "he". Na izany aza, ny fitsipi-pitenenana dia somary tsy mampaninona. Na izany aza, zava-dehibe ny hananan'ny Fanahy Masina toetrany manokana. Tsy hery tsy mizaha tavan'olona izy fa mpanampy manan-tsaina sy Andriamanitra izay mitoetra ao amintsika.
Fanahinny Testamenta Taloha
Ny Baiboly dia tsy misy ampahany mitondra ny lohateny hoe "Ny Fanahy Masina". Mianatra kely avy amin'ny Fanahy Masina isika etsy sy eroa rehefa miresaka azy ny Baiboly. Fanomezana vitsivitsy ihany no manome antsika ny Testamenta Taloha. Ny saina dia teo amin'ny famoronana fiainana (Genesisy 1: 1,2; Joba 33,4: 34,14;,). Ny Fanahin'Andriamanitra dia nahafeno an'i Bezalela tamin'ny fahaizana nanangana ny tranolay (Nomery 2: 31,3-5). Namita an'i Mosesy izy ary tonga hatramin'ny anti-panahy 70 koa (Genesisy 4:11,25). Nameno an'i Josoa tamin'ny fahendrena izy amin'ny maha mpitarika azy, tahaka an'i Samsona tamin'ny tanjaka sy ny fahaizana miady (Deoteronomia 5; Richter [habaka]] 34,9; 6,34). Ny fanahin'Andriamanitra dia nomena an'i Saola ary nentina indray (1 Sam 10,6; 16,14). Ny Fanahy dia nanome an'i David ny drafitra ho an'ny tempoly (1 Kr 28,12). Ny fanahy dia nanentana ny mpaminany hiteny (Nomery 4; 24,2 Sam 2; 23,2 Chr 1; 12,18 Chr 2; 15,1; Ezekiela 20,14; Zakaria 11,5; 7,12 Petera 2:1,21) ,
Ao amin'ny Testamenta Vaovao koa, ny Fanahy Masina no nahatonga ny olona hiteny toa an'i Elisabeth, Zakaria ary Simeona (Lioka 1,41; 67; 2,25-32). Jaona Mpanao Batisa dia feno ny Fanahy Masina hatramin'ny nahaterahany (Lioka 1,15). Ny asany lehibe indrindra dia ny fitoriana ny fahatongavan'i Jesosy Kristy, izay hanao batemy ny olona tsy amin'ny rano fotsiny fa amin'ny Fanahy Masina ary amin'ny afo (Lioka 3,16).
Ny Fanahy Masina sy i Jesosy
Ny Fanahy Masina dia nanatrika teo ary nandray anjara tamin'ny fiainan'i Jesosy. Ny fanahy no nahatonga azy ho sahy (Matio 1,20:3,16), natolony azy taorian'ny batisany (Matio), nitarika azy tany an-efitra (Lk4,1) ary nahafahany nitory ny vaovao tsara (Lioka 4,18). Jesosy namoaka demonia tamin'ny fanampian'ny Fanahy Masina (Matio 12,28). Tamin'ny alàlan'ny Fanahy Masina, dia nanolotra ny tenany ho sorona noho ny fahotan'ny olombelona izy (He 9,14) ary io fanahy io dia natsangana tamin'ny maty (Romana 8,11).
Jesosy dia nampianatra fa ny Fanahy Masina dia niresaka tamin'ny fanenjehana nataon'ny mpianany (Matio 10,19: 20). Nasainy nanao batisa ireo mpanara-dia an'i Jesosy tamin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina izy (Mat. 28,19). Ary fanampiny koa dia manome ny Fanahy Masina ho an'ny olona rehetra Andriamanitra rehefa mangataka aminy izany (Lioka 11,13). Ny sasany amin'ireo zavatra lehibe indrindra nolazain'i Jesôsy momba ny Fanahy Masina dia azo jerena ao amin'ny Filazantsaran'i Jaona. Voalohany dia tokony ho teraka ny rano sy ny fanahy ny olona (Jaona 3,5). Mila fanavaozana ara-panahy ny olona ary tsy avy aminy, fa fanomezana avy amin’Andriamanitra. Na tsy hita ny saina dia misy fiovana eo amin'ny fiainantsika (V. 8).
Jesosy dia nampianatra: "Izay mangetaheta, mankanesa at and amiko. Izay mino ahy, araka ny voalazan'ny Soratra Masina, dia hanana renirano velona miboiboika avy amin'ny vatany. Nefa izao no nolazainy momba ny fanahy izay tokony horaisin'ny mino azy; fa ny fanahy dia tsy mbola teo; satria tsy mbola nomena voninahitra i Jesosy » (Jaona 7,37-39).
Manome fahafaham-po ny Fanahy Masina ny Fanahy Masina. Izy io dia ahafahantsika mitondra ny fifandraisany amin'Andriamanitra izay nahary antsika. Mahazo ny Fanahy isika amin'ny fanatonana an'i Jesosy sy ny Fanahy Masina manatanteraka ny fiainantsika.
Hoy i Johannes «Fa ny fanahy tsy mbola teo; satria tsy mbola nomena voninahitra i Jesosy » (V.39) , Efa feno lehilahy sy vehivavy ny Fanahy talohan'ny fiainan'i Jesosy, saingy tsy ho ela izany dia ho avy amin'ny fomba mahery vaika - amin'ny Pentekosta. Omena ho an'izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo ny Fanahy ankehitriny (Asan’ny Apostoly 2,38: 39). Nampanantena ny mpianany i Jesosy fa homena azy ny fanahin'ny fahamarinana izay honina ao (Jaona 14,16-18). Io fanahin'ny fahamarinana io dia mitovy amin'ny hoe i Jesosy mihitsy aza dia tonga tamin'ny mpianany (V. 18) satria izy dia Fanahin'i Kristy sy Fanahin'ny Ray - nirahin'i Jesosy sy ny Ray (Jaona 15,26). Ny Fanahy dia mamela an'i Jesosy ho afaka hidiran'ny tsirairay sy ny asany hitohy, ary Jesosy dia nampanantena fa ny Fanahy dia hampianatra ireo mpianatra ary hampahatsiahivina azy ireo ny zavatra rehetra nampianarin'i Jesosy azy (Jaona 14,26). Ny Fanahy dia nampianatra azy ireo zavatra izay tsy ho azony alohan'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty (Jaona 16,12: 13).
Ny fanahy no miresaka an'i Jesôsy (Jaona 15,26:16,24;). Tsy mivavaka ho an'ny tenany izy fa mitarika ny olona ho any amin'i Jesosy Kristy sy ny Ray. Tsy mitonona ho azy irery izy fa eo amin'ny sain'ny ray ihany (Jaona 16,13). Tsara raha tsy miaraka amintsika intsony i Jesosy satria mety miasa mavitrika olona an-tapitrisany ny Fanahy (Jaona 16,7). Ny evanjelin'ny Fanahy dia maneho sy maneho amin'izao tontolo izao ny fahotany sy ny fahotany ary manatanteraka ny filàny ny fahamarinana sy ny fahamarinana (And. 8-10). Ny Fanahy Masina dia manondro ny olona an'i Jesosy ho vahaolana ho fanamelohana sy loharanon'ny fahamarinana.
Ny Fanahy sy ny Fiangonana
Jaona Mpanao Batisa nilaza fa hanao batemy ny olona amin'ny Fanahy Masina i Jesosy (Marka 1,8). Nitranga izany tamin'ny Pentekosta taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty rehefa nomen'ny Fanahy hery vaovao ireo mpianatra (Asan’ny Apostoly 2). Anisan'izany ny fitenenana fiteny samihafa izay takatry ny olon-kafa (V. 6). Ny fahagagana mitovy amin'izany dia nitranga tamin'ny fotoana hafa nitombo ny Fiangonana (Asan’ny Apostoly 10,44: 46-19,1; 6), tsy voalaza akory fa nanjo ireo olona rehetra nahita finoana kristiana ity fahagagana ity.
Nilaza i Paul fa ny mpino rehetra ao amin'ny Fanahy Masina dia miforona ho vatana iray, dia ny Fiangonana (1 Korintiana 12,13). Ny Fanahy Masina dia omena izay mino (Galatiana 3,14). Na inona na inona fahagagana nitranga na tsia, ny mpino rehetra dia atao batisa amin'ny Fanahy Masina. Tsy ilaina ny mitady sy manantena fahagagana iray manokana mba hanaporofoana fa vita batisa amin'ny Fanahy Masina ianao.
Ny Baiboly dia tsy mitaky mpino iray hatao batisa amin'ny Fanahy Masina. Fa kosa, ny mpino rehetra dia entanina mba ho feno ny Fanahy Masina (Efesianina 5,18) mba hahafahan'ny olona mamaly ny toromarika avy amin'ny fanahy. Mitohy io fifandraisana io ary tsy hetsika indray mandeha. Raha tokony hitady fahagagana isika, dia aleo mitady an'Andriamanitra ary avelao izy hanapa-kevitra raha ary rahoviana no misy fahagagana. Matetika i Paoly dia milazalaza ny herin'Andriamnitra fa tsy amin'ny fahagagana ara-batana mitranga, fa amin'ny alàlan'ny fiovana mitranga ao amin'ny fiainan'ny olona iray - fanantenana, fitiavana, faharetana, fanompoana, fahatakarana, ny fijaliana ary ny fitoriana (Romana 15,13:2; 12,9 Korintiana 3,7; Efesiana 16; 18-1,11; Kolosiana 28; 29-2; 1,7 Timoty 8). Ireo fahagagana ireo dia azo antsoina koa hoe fahagagana ara-batana satria manova ny fiainan'ny olona Andriamanitra.Ny Asa dia mampiseho fa nanohana ny fitomboan'ny fiangonana ny Fanahy. Nanome fahefana ny olona hitatitra sy hijoro ho vavolombelona momba an'i Jesosy ny Fanahy (Asan’ny Apostoly 1,8). Izy no nahavita nitory (Asan 'ny 4,8,31; 6,10). Nanome torolalana tamin'i Filipo izy ary nisambotra azy taty aoriana (Asan 'ny 8,29; 39). Nampahery ny Fiangonana ny Fanahy ary nametraka mpitarika (Asan 'ny 9,31; 20,28). Niresaka tamin'i Petera sy ny Fiangonan'i Antiokia izy (Asan’ny Apostoly 10,19; 11,12; 13,2). Niasa tany Agabus izy rehefa nahita ny mosary ary nitarika an’i Paoly handositra (Asan’ny Apostoly 11,28:13,9; 10). Notarihin'i Paoly sy i Barnabasy izy ireo (Asa. 13,4: 16,6; 7) ary nahafahan'ny fivorian'ny apostoly tany Jerosalema nandray fanapahan-kevitra (Asan’ny Apostoly 15,28). Nandefa an'i Paoly ho any Jerosalema izy ary nampitandrina azy momba izany (Asan’ny Apostoly 20,22: 23-21,11;). Nisy ny Fiangonana ary nitombo tamin'ny alàlan'ny asan'ny Fanahy Masina tao amin'ny mpino.
Ny fanahy ankehitriny
Ny Fanahy Masina koa dia voarohirohy amin'ny fiainan'ny mpino ankehitriny:
Izany dia mitarika antsika hibebaka ary manome fiainana vaovao (Jaona 16,8; 3,5-6)
Mitoetra ao amintsika Izy, mampianatra sy mitarika antsika (1 Korintiana 2,10: 13-14,16; Jaona 17,26: 8,14; Romana)
Nihaona taminy tao amin'ny Baiboly izahay, raha mivavaka sy amin'ny alàlan'ny kristiana hafa.Ilay fanahin'ny fahendrena izy ary manampy antsika hijery zavatra feno herim-po, fitiavana ary fifehezan-tena (Ef 1,17:2; 1,7 Timoty)
Ny fanahy dia manapaka ny fontsika, manamasina ary manova antsika (Romana 2,29; Efesiana 1,14)
Ny Fanahy dia mamorona fitiavana sy ny vokatry ny fahamarinana ao amintsika (Rom.5,5; Efesiana 5,9; Galatiana 5,22-23)
Manome antsika ao amin'ny Fiangonana ny Fanahy ary manampy antsika hahatakatra fa zanak'Andriamanitra isika (1 Korintiana 12,13:8,14; Romana 16)
Tokony hivavaka amin'Andriamanitra amin'ny fanahy isika (Phil3,3; 2 Korintiana 3,6; Romana 7,6; 8,4-5). Miezaka ny hampifaly azy isika (Galatiana 6,8). Rehefa tarihin'ny Fanahy Masina isika dia omeny fiainana sy fiadanana (Romana 8,6). Amin'ny alalany no ahafahantsika miditra ao amin'ny razana (Efesiana 2,18). Manampy antsika amin'ny fahalemeny Izy ary mijoro ho antsika (Romana 8,26-27).
Ny Fanahy Masina dia manome antsika ara-panahy koa. Manome mpitarika ho an'ny fiangonana izy (Efesiana 4,11), olona manao ny asan'ny asa fanompoana fitiavana ao am-piangonana (Romanina 12,6: 8) sy ireo manana fahaiza-manao manokana ho an'ny asa manokana (1 Korintiana 12,4: 11). Tsy misy olona manana ny fanomezana rehetra fa tsy ny fanomezana rehetra dia omena ny rehetra (And. 28-30). Ny fanomezana rehetra, na ara-panahy na tsia, dia tokony hampiasaina amin'ny asa manontolo - ny Fiangonana manontolo (1 Korintiana 12,7:14,12;). Ny fanomezana rehetra dia manan-danja (1 Korintiana 12,22: 26). Hatramin'izao dia ny voaloham-bokatry ny Fanahy ihany no azontsika, izay, nefa, mampanantena zavatra bebe kokoa antsika amin'ny ho avy (Romana 8,23; 2 Korintiana 1,22; 5,5; Efesiana 1,13-14).
Ny Fanahy Masina dia Andriamanitra ao amin'ny fiainantsika. Ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra dia ataon'ny Fanahy Masina. Koa mamporisika antsika Paul mba hiara-hiaina amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina (Galatiana 5,25; Efesiana 4,30; 1 Tes 5,19). Andao hihaino izay lazain'ny Fanahy Masina. Satria rehefa miteny izy dia miteny Andriamanitra.